Global Voices teny Malagasy » Tantaran’i Shina voasivana: Ny tolona hitondrana ny tsiaron’ny fandripahana tao Tiananmen mankany amin’ny hoavy · Global Voices teny Malagasy » Print
Tantaran'i Shina voasivana: Ny tolona hitondrana ny tsiaron'ny fandripahana tao Tiananmen mankany amin'ny hoavy
Voadika ny 02 Aogositra 2019 5:51 GMT 1	 · Mpanoratra Citizen Lab, Weiboscope HKU Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara
Shinoa mpisera aterineto mamoaka ny asakanto, hira ary sary-sy-soratra manondro ny fandripahana tao an-kianjan'i Tiananmen tamin'ny taona 1989. Sary avy amin'i Weiboscope .
Ho fanamarihana ny faha-30 ny tsingerintaonan'ny fandripahana tao an-kianjan'i Tiananmen, namory angom-botoaty mifandraika amin'ny 4 jona  izay voasivana ao amin'ny media sosialy ao Shina ny ekipam-pikarohana ao amin'ny Weiboscope  an'ny Oniversiten'i Hong Kong sy ny Weiboscope  an'ny Oniversiten'i Toronto. Azavainay anaty andian-tsoratra avoaka ato amin'ny Global Voices ny famakafakanay ireo votoaty voasivana. Tamin'ny 17 avrily no nivoaka ny lahatsoratra voalohany  ary tamin'ny 27 jona no nivoaka ny faharoa .
Telopolo taona izao ny Antoko Komonista Shinoa sy ny olompirenena no voahidy ao anaty tolona iray amin'ny fahatsiarovana ny fandripahana tao an-kianjan'i Tiananmen tamin'ny 4 jona 1989. Isa-taona, manodidina ny faramparan'ny volana mey ny milim-pibahanam-panjakana no velomina hanakanana ireo fahatsiarovana ny zava-mitranga mba tsy hipongatra na antserasera na ivelan'izany. Na eo aza anefa izany, tohizan'ny olom-pirenena amin'ny alalan'ireo fotoam-pahatsiarovana fanao isa-taona, fikolokoloana ara-tantara, hira ary sary-sy-soratra an-tserasera ny hetsika isan-karazany. Manome jery avy amin'izany tolona izany ny angona  votoaty voasivana mifandraika amin'ny 4 jona ao amin'ny Citizen Lab sy ny Weiboscope.
Fikolokoloana ny tantara
Voasivana fatratra ao amin'ny media sosialy ao Shina ny boky sy ireo dosie izay mandrakitra sy manadihady ny tantara sy ny vokatry ny hetsika ho amin'ny demaokrasia nataon'ny mpianatra tao Tiananmen. Tafidiitra ao amin'ny votoaty voasivana ny fanondroana ny The Gate of Heavenly Peace , boky nosoratan'ilay mpahay tantara Jonathan D. Spence momba ny revolisiona shinoa, sy ny filma iray mitondra anarana toy izany koa  avy amin'ilay Amerikana mpanao filma, Carma Hinton, izay nandahatra araka ny daty ny hetsi-panoheran'ny mpianatra sy ny famoretana nataon'ny miaramila.
Ao amin'ny sehatra media sosialy shinoa famahanam-bilaogy bitika Weibo, miara-mamory ireo torohay ara-tantara avy amin'ny fomba fijerin'ny any am-bohitra ny mpisera, tafiditra amin'izany ny isan'ny maty sy maratra, ireo fifanandrinana nisy teo amin'ny miaramila sy ny mpanao fihetsiketsehana, fijoroana vavolombelon'ny nanatri-maso, ary ny fizotran'ny hetsi-panoherana sy ny fandripahana nanaraka izany. Maro amin'ireo tsanganana mifandraika amin'ny 4 jona hita ao amin'ny Weibo voasivana no torohain'ny zava-nitranga avy amin'ny loharanom-baovao nekena ny fahamarinany, tafiditra amin'izany ny fitantaran'ny mpanao gazety, lahatsary fototra, saripika, boky, tahirin-kevitra ary dosie. Na dia mananika aza ny fibahanana, ireny tsanganana ireny no manome marika tsy fitovian-kevitra amin'ny propagandin'ny fanjakana mikendry ny hanarona ny zavamisy manodidina ny fandripahana.
Hira natao ho mari-pahatsiarovana
Mampiasa ny hira sy endrika hafa natao ho fahatsiarovana ny 4 jona nandritra izay 30 taona izay ihany koa ny Artista. Ny mpitendry hira avy ao Shina tanibe, Hong Kong, ary Taiwan no nahenoana feo matanjaka indrindra fanohanana ireo lasibatra tamin'ny fandripahana tao an-kianjan'ny Tiananmen sy ireo hetsika demaokrasia ao Shina. Hita ao amin'ireo tsanganana voabahana ao amin'ny Weibo  anelanelan'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra jona isa-taona tanelanelan'ny taona 2012 sy ny taona 2018, ireo album covers sy ny sarin'ireo artista tahaka ilay mpisava lalan'ny Rock shinoa monina ao Beijing, Cui Jian, na ry Anita Mui Yim-fong mpihira ao Hong Kong, ary ilay Taiwaney mpihira sady mpamoron-kira Lo Ta-yu izay samy nanao hira malaza ho fahatsiarovana ilay zava-nitranga avokoa.
Hoy ny nosoratan'ilay mpisera hoe: “Mizara ny hiran'i Cui Jian ‘Tsy misy amin'ny anarako’: Tiako ny manokana ity hira ity ho an'ny mpianatra”. (Nozaraina tamin'ny 3 Jone 2014 ary voasivana ny ampitson'io.) Sary avy amin'i Weiboscope .
Hoy ny fivakin'ny avy amin'ilay mpisera hoe: “Mizara ny hiran'i Luo Ta-you ‘Alina Beijing’: Anio, henoy ity hira ity: mitsoka mafy ny rivotra, mikotrokotroka ny orana, mahafaty ny kotroka, mavesatra ny setroka mahafaty, ny feo, ny ampongamaroanaka, ny tabataba, mafana, mafana, ilay mpihira, ilay mpihira, ilay mpihira, Avy any ambony ry zareo, avy any ambany, ambonin'ny tany sy ambanin'ny tany. Niafina anarivony taona ry zareo ary nangina”. (Nozaraina tamin'ny 4 jona 2014 ary voasivana androtr'io ihany.) Sary avy amin'i Weiboscope .
Hita ao amin'ireo teny fototra voasivana ao amin'ny media sosialy ny fanondroana ny hita tahaka ny “Neny, tsy nanao zava-mahadiso aho” (妈妈我没有做错 ), avy amin'ilay artista rock and roll avy ao Hong Kong antsoina hoe Danny Summer, sy ny hoe “Tokony hisy fitiavana amin'ny jona” (六月里应该有爱), avy amin'ilay tarika punk shinoa Punkgod. Ireo hira ireo dia samy nosoratana ho fahatsiarovana ny tsingerintaona faha-20 ny hetsika Tiananmen tamin'ny taona 2009. Namorona ilay hira ho fanehoana fanohanana sy ho firaisam-po amin'ireo mpianatra nandray anjara tamin'ny hetsi-panoherana tamin'ny taona 2009 i Danny Summer, fantatra any amin'ireo faribolana sasantsasany ho voalohany indrindra nanao ny rock and roll tao Hong Kong. Punkgod, tarika iray avy ao Jiangxi atsimo atsinanan'i Shina, nanokana album (rakikira) iray manontolo  tamin'ny taona 2009 ho fahatsiarovana ny tsingerintaona faha-20 ny hetsika Tiananmen.
Sary-sy-soratra ho fahatsiarovana
Isa-taona ny mpiserasera shinoa no miezaka midify ny sivana amin'ny media sosialy amin'ny alalan'ny famoahana sary-sy-soratra manome sariohatry ny 4 jona. Ny tsanganana Weibo nangonin'ny Weiboscope  tanelanelan'ny 2012-2018 ary natolotra ho hitan'ny sarambabem-bahoaka indray tamin'ity taona ity, no mampiseho ireo fahaiza-mamorona fomba vaovao ampiasain'ny mpisera hisongonana ireo Shinoa mpanatanteraka ny sivana. Ny ankamaroan'ireo manome endrika tanky (fiara mifono vy) nampiasain'ny governemanta tamin'ny famoretan'ny miaramila ny sivily. Hita ao amin'ireo tsanganana ireo ny fandaharana fonon-tsigara, kilalao gana mavo, boky, fango (lôgô) ary zavatra hafa hanehoana an-kafetsena ilay sary malaza dia malaza manavaka ilay Tank Man mijoro eo anoloan'ireo tanky milahatra ao an-kianjan'i Tiananmen. Ny tsanganana hafa moa mizara tantara antsary sy asakanto izay mamaritra tanky amin'ny ankapobeny.
Sary manjavozavon'ny tanky asian'ilay mpisera fanazavana an-tsary tsy misy ifandraisany amin'ny tranga 4 jona. (Nozaraina tamin'ny 4 jona 2012 ary voasivana tamin'ny 6 Jona 2012.) Sary avy amin'i Weiboscope .
Sarina fonon-tsigara natao miendrika tanky ary misy fanazavana an-tsoratra avy amin'ny mpisera manao hoe “androany ny andro iraisampirenena tsy ifohana sigara, aza mifoka sigara azafady”. (Nozaraina tamin'ny 4 jona 2016 ary voasivana androtr'io ihany.) Sary avy amin'i Weiboscope .
Misy ihany koa ireo seho mivantambatana ahitana sarin'artista misokitra ny tarehimarika enina sy efatra eo amin'ny biriky iray, sy vondrona poety manao sarontava raha nanatrika fivoriana kely tao amin'ny Manda Lehibe tao Beijing tamin'ny taona 2013.
Fampisehoana ataon'Artista. Nozaraina tamin'ny 3 jona 2013 ary voasivana tamin'ny 6 jona 2013. Sary avy amin'i Weiboscope .
Lahatahirin-tenifototra  avy amin'ny Citizen Lab no mampiseho ny fampiasain'ny Shinoa mpiserasera fiteny ankamantatra hanondroana ny 4 jona. Tenifototra maro no mampiseho tarehimarika romana sy fitambaran-tarehimarika hanondroana ny 4 jona tahaka ny “VI IV”, “VIII IX VI IV”, “1+3”, “32×2”. Misy ireo tenifototra tsy miharihary loatra tahaka ny “*(^$” fitohizan-tarehintsoratra spesialy (manokana) izay manondro ny tarehintsoratra 8964 eo amin'ny kitendry.
Mampiasa fomba hafa ihany koa ny mpisera amin'ny tarehintsoratra shinoa entina hanondroana ilay toe-javatra. Ny annkamaroan'ireo tarehintsoratra shinoa ireo dia fitambaran-tarehintsoratra kelikely kokoa izay azo zarazaraina ho lasa fototeny sy vanin-teny. Samahan'ny mpisera ireo tenifototra manohina ho lasa tarehintsoratra misaratsaraka mba ho tafala amin'ny sivana. Ohatra amin'izany, “20周年纟己念氵舌云力建讠义” (tolokevitra fiaraha-mahatsiaro ny faha-20 taona) manasamatsamaka ny tarehintsoratra “纪念活动建议” ( jǐ niàn huó dòng jiàn yì, tolokevitra fiaraha-mahatsiaro) ho lasa vanin-teny sy fototeny “纟己念氵舌云力建讠义” (sī jǐ iàn shuǐ shé yún lì jiàn yán yì).
Mitondra ny fahatsiarovana mankany amin'ny hoavy
Hatramin'ny 4 jona 1989, henjana dia henjana ny ezaka nataon'ny governemanta shinoa hanesorana ny tsiaron'ny famoretana tsimifaditrovana hiala amin'ny saim-bahoaka amin'ny alalan'ny sivana mananika. Nahita tamin'ny fanandramana kely nataony  i Lousia Lim, menavazana solotenan-gazety tao Shina fa 15 monja amin'ny mpianatra 100 ao Shina no mahafantatra ilay sary malazan'i Tank Man, ary ireo kaonty avy amin'ny teraky ny taonarivo ao Shina no manoritsoritra karazana tsi-firaharahiana  ny ezaky ny governemanta hanaisotra ny toe-java-nitranga hiala amin'ny tsikalakalam-pieritreretana iraisana. Na izany aza, ireo asam-pitadidiana avy amin'ny labozia an'aliny mirehitra  ao Victoria Park ao Hong Kong, ny feon'ny hira pop amin'ny teny kantoney mifindra eny amin'ny rivotra, ireo sary mampitsiky ny Tank man na ny “64” fotsiny mitsangana ao amin'ny Weibo dia efa mampiseho ny fitohizan'ezaka hahatsiaro.
Naoty: Ho fiarovana ny fiainana an-takonan'ny mpisera Weibo, nomena solon'anarana avokoa ireo tsanganana hita amin'ny pikantsary rehetra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/08/02/141346/
 angom-botoaty mifandraika amin'ny 4 jona: https://netalert.me/june-four.html
 lahatsoratra voalohany: https://globalvoices.org/2019/04/17/chinas-censored-histories-commemorating-the-30th-anniversary-of-the-tiananmen-square-massacre/
 The Gate of Heavenly Peace: https://www.penguinrandomhouse.ca/books/321594/the-gate-of-heavenly-peace-by-jonathan-d-spence/9780140062793
 mitondra anarana toy izany koa: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Gate_of_Heavenly_Peace_(film)
 album (rakikira) iray manontolo: https://www.boxun.com/cgi-bin/news/gb_display/print_versiOn.cgi?art=/gb/pubvp/2009/06&link=200906090911.shtml
 fanandramana kely nataony: https://www.theguardian.com/books/2015/jul/24/the-peoples-republic-of-anmesia-tiananmen-revisited-louisa-lim-review
 karazana tsi-firaharahiana: https://www.nytimes.com/2014/06/04/opinion/tiananmen-forgotten.html?smid=tw-share&_r=0
 labozia an'aliny mirehitra: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-48516455